व्यङ्ग्यात्मक गीतसमेत पचाउन नसक्ने प्रगतिशीलको खोल ओढेका तानाशाह
सुरज डिजी खनाल आइतबार, फागुन ५, २०७५
काठमाडौँ, ५ फागुन – चर्चित गायक पशुपति शर्माले हालै बजारमा ल्याएको लोक तथा दोहोरी गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ ले नयाँ वहस सिर्जना गरेको छ।
गत शुक्रबार गायक शर्माले आफ्नो युट्युव च्यानलमार्फत उक्त गीत बजारमा पठाएका थिए। ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ व्यङ्ग्यात्मक गीत भएकाले छोटोमा समयमा लोकप्रिय बन्यो। तर विडम्बना गायक शर्माले यो गीत हटाउन बाध्य हुनु पर्यो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा खैलाबैला मच्चाउन सफल भएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ ले सामाजिक सञ्जाल कब्जा जमाएको छ। गायक शर्माले गीतमा केही शब्दहरु सच्चाएर पुनः गीत युट्युवमा राखिने जानकारी दिदै फेशबुकमा स्टाटस लेखेका छन्। गीत युट्युवबाट हटेपनि सामाजिक सञ्जालमा गीतलाई शेयर गर्नेहरु झन् बढेका छन्।
एक थरी मानिसहरुले गीत व्यङ्ग्यत्मक भएकाले हटाउन नहुने तर्क दिएका छन्। अर्को तर्फ गीत हटाउनको लागि गायक शर्मालाई सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले चर्को दबाब र धम्कि दिएका थिए।
तानाशाही राणा शासन, निरंकुश राजतन्त्रका बिरुद्धमा गीत गाएका नेपाली कलाकारहरुले गणतन्त्रका शासकहरुका अनैतिक र बदनियतपूर्ण कामका बिरुद्धमा गीत गाउँदा गायक शर्माले कुनै अन्याय र अपराध गरेका होइनन् । उनले कि त गीत बजारमा नल्याएकै बेस हुने थियो ।
बजारमा भाइरल बनि सकेपछि गीतका शब्द सच्याएर पुनः गीत बजारमा ल्याउनुको खास अर्थ देखिदैन। गायक शर्माले सरकार र नेकपाका नेता कार्यकर्ताबाट जुन प्रकारको दवाफ खेप्नु पर्यो त्यसको सामना गर्न किन सकेनन् ? सत्तारुढ दल नेकपाबाहेक सम्पूर्णको साथ गायक शर्मालाई रहेको बेला गीत हटाउनु पर्ने बाध्यता कसरी आयो ?
यस्ता गीतहरुबाट हिजोका दिनहरुमा राणा शासक र पञ्चायती तानाशाहीहरु त्रसित हुन्थ्ये। तर गणतन्त्रका प्रगतिशिल भनिने शासकहरु समेत पशुपति शर्माको गीतबाट त्रसित भएको यस प्रकरणले पुष्टि गर्छ। आलोचना र ब्याङ्ग्य पचाउन नसक्ने यस्ता शासकहरु अन्ततः तानाशाहीकै अर्को रुपमा लिन सकिन्छ।
यस प्रकरणका बारेमा पत्रकार क्षितिज समर्पण आफ्नो फेशबुकमा लेख्छन्, हिजो पन्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा जेबी टुहुरे, रायन, रामेश र जीवन शर्माहरुले गीत नगाएको भए, तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा कलाकारहरुले गीत नगाएको भए, जागरण नल्याएको भए, ०६२ - ०६३ को जनआन्दोलनमा बद्री पङ्गेनी र बिष्णु खत्रीहरुले गीत नगाएको भए, वा अनेक आन्दोलन र संघर्षहरुमा कलाकार र लेखकहरुले साथ नदिएको भए थाहा छैन अहिलेका शासकहरु कुन अवस्थामा हुन्थे ?
पन्चायतविरुद्ध गीत गाउन हुने राजाविरुद्ध गीत गाउन हुने अनि, गलत काम काम गर्ने गणतन्त्रका शासकहरुविरुद्ध चाहिँ गीत गाउन नहुने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो, यो कस्तो गणतन्त्र हो कमरेड ? माफ गर्नुहोला यो कदममा चाहिँ घाँटी छिनाएपनी साथ दिन सकिन्न ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ५, २०७५ ०४:०३